Disease - Hospital Shijiazhuang Yiling
The waxgarashada ugu kala duwan ee cudurka waa midnimada fikradda guud iyo fikradda lahjado. TCM tixgeliyo dad ah oo dhan. Waayo, cudur, waa ma aha oo kaliya ka soo cudurka laftiisa, laakiin sidoo kale ka jidhka oo dhan ah aadanaha. Tani waxay sahlaysaa in la ogaado sababta asalka u ah cudurka ku.
isku dhafan ee dawada Chinese dhaqanka iyo daawada casriga ah ee reer galbeedka waa is dhexgalka oo ka mid ah oo dhan oo la taaban karo ka. isku dhafan ee sheybaarada waaweyn iyo waxa uu isugu jiraa midnimo iyo dialectics. Waxaa ugu faa'iido badan, waayo, jidhka bini'aadamka inuu ka soo kabsado.
Gaar ahaan kansarka, atrophy muruqa, cudurka neuron motor, scleroderma, laabotooyinka, fibromyalgi, sonkorowga, cudurka kelyaha, isku darka of daaweyn daawo Chinese iyo Western dhaqanka, daaweynta daawada Chinese dhaqameed caan, saamaynta waa mid aad u muhiim ah.
Haddii rabto in aad ogaato sida dhaqanka daawo Chinese oo daawaynaya cudurka iyo sida in la isu geeyo daawo-dhaqameed Chinese daawo galbeedka in lagu daweeyo cudurada. La tasho khubarada ama naga tegin fariin.